Nivory ny SECES androany ary nanao fanambarana milaza fa « tsy marina ny voalazan-dRamatoa Minisitra momba io « heures complémentaires » takian’ny SECES io ». « Azo hamarinina any amin’ny Tahirimbolam-panjakana fa « zara raha ampy ny 10%n’io mari-bola io akory ny « heures complémentaires » na ora fanampiny isan-taona ho an’ny mpampianatra-mpikaroka sy mpikaroka-mpampianatra manerana ny Nosy », hoy ny fanambarana. Koa « tsy mendrika ny firenentsika no sady fanetriben’ny tany ny filazana zavatra tsy marina ».
Nanamafy ihany koa ny minisitra nandritra ny filankevitry ny minisitra fa « tsy foana ny lamina LMD fa ny fanaovana boky ho an’ny fahazoana ny marim-pahaizana « Licence » no tsy atao intsony ho fampiharana ny didim-pitondrana efa nisy ny taona 2010 izay manambara fa fanadinana dingana farany no takiana noho ny fanavaozana ny fandrindrana eny anivon’ny Oniversite natao tamin’izany fotoana izany. Io dia lamina efa misy manerana ireo oniversite manerantany ».
Nanipika mazava anefa ny SECES tamin’ny fanambarana nataony androany fa « tsy azo simbaina na potehina ny lentam-pahaizan’ny mpianatra mandranto fianarana ety amin’ny anjerimanontolo miankina amin’ny fanjakana, koa hajao ny lalàna manan-kery mamaritra ny « Offre de formation » sy ny dingana tsy maintsy lalovan’ny mpianatra amin’ny fahazoany ny mari-pahaizana, toy ny « Licence », « Master » ary ny « Doctorat » ao anatin’ny rafitra LMD ».